धवलागिरीमा वडामै पुगेर योजना सम्झौता – धौलागिरी खबर
धवलागिरीमा वडामै पुगेर योजना सम्झौता
धौलागिरी खबर	 २०७७ पुष १२, आईतवार १२:५९ गते मा प्रकाशित 362 0
म्याग्दी, । भौगोलिक रुपमा बिकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले वडामै पुगेर योजना सम्झौता सुरु गरेको छ ।
गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु वडामै पुगेर योजना सम्झौता गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरुलाई कार्यालयमा जाने समयको बचत र झञ्जट हटेको छ । सहज र सरल हिसाबले नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउन वडामै पुगेर योजना सम्झौता गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार वडा न. ६ मराङ र वडा न. ५ मल्कवाङका १९ वटा योजनाका उपभोक्ता समितिसँगै बिहीबार मराङमा घुम्ति शिविर सञ्चालन गरेर योजना सम्झौता गरिएको छ । “गुर्जाका तीन वटा योजनाका उपभोक्ता समितिले कार्यालयमै आएर सम्झौता गरिसके,” उहाँले भन्नुभयो “छिट्टै ताकम र मुदीमा पनि गएर योजना सम्झौता गर्ने तयारीमा छौ ।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद खराल, इञ्जिनियर सोबिन जिसी, नायब सुब्बा रमेश पौडेलको टोली मराङ पुगेको थियो । वडा अध्यक्ष खर्ककुमारी छन्त्याल, राजाराम सुबेदी, सचिव बेदनाथ सुबेदीले शिबिर सञ्चालनमा सहजिकरण गर्नुभएको थियो । १८ वटा उपभोक्ता समितिलाई पेश्कि समेत उपलब्ध गराइएको थियो ।
मराङ र मल्कवाङका बासिन्दा मुना स्थित गाउँपालिका कार्यालय पुग्न मालिका गाउँपालिकाको बिम, दरवाङ, धारापानी, ताकम हुदै गाडीमा करिब चार घण्टा घुमाउरो बाटो हिड्नुपर्छ । पैदल हिड्दा पुरै दिन लाग्छ । वडामै सम्झौता गर्ने सुबिधा भएपछि गाउँपालिका जान आउन हुने खर्च र समयको बचत र झञ्जट हटेको प्रगति युवा क्लवको भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष चक्रबहादुर पुनले बताउनुभयो ।
“गाउँपालिका पुगेर केही कागज नमिलेपछि फेरी फर्किर वडामै आउनपर्दथ्यो,” उहाँले भन्नुभयो “कर्मचारीहरुले गाउँमै आएर सेवा दिदाँ घरआगनमै सरकार भेटेको अनुभव भयो ।” मराङका वडा अध्यक्ष राजाराम शर्माले ११ वटा मध्य ९ वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समिति गठन र प्राबिधिक सर्बेक्षणको काम धमाधम भैरहेको छ । ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् । बर्खा सुुरु नहुदै काम सकेर आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार हतारमा लटरपटर काम गरेर बजेट सक्ने प्रबित्ति रोक्न धवलागिरीका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले पहल थालेका छन् ।